ego .... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #157
Daalụ natara: 14
Kudos (m na-ekwu na nke ahụ n’esiri ike ihe ọ pụtara) n’ebe ndị na-ewu BT-67 nọ! Super mara mma nka ga efe. Anọ m mgbe niile (kemgbe nwata) bụ onye na-akwado C-47 (ma ọ bụ DC-3). Comebaba n’ime Rikooo ma chọpụta na agbanweela ya n'ụzọ niile dị mma. Edegidere m ịdakwasị obere oge, echere m ka m gbaa mbọ gbadata n'ụgbọelu na-ebugharị. Chefue ime ka ibu dị mfe, ma rapara ya. Na-akpọre azụ maka oche zuru ezu wepu wee mee ya. Enwetara m nseta ihuenyo ya mana enweghị ike iji ha rụọ ebe a.
Rikooo, unu nwere ndi njem ugbo ala di nma. A1 Skyraider ga-amasị m FSX. Enwere otu na 2004. Ọ dịghị mkpa na m ga-agwa gị ... "nọgide na-arụ ọrụ ọma". O yiri ka ọ dịkarịa ala ọdịdị gị nke 2.
Banyere, PAYSON / Keith
ego .... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #170
Ọ maara .... nke a bụ otu nsogbu a na saịtị a ... ọ na-ewe otu nnụnụ ka ọ bụrụ onye na -
dịka maka ihuenyo ..... were prnt.sc/ :) I've used that to get my screenshots for a WHILE. you can even upload stuff right from your computer onto there
ego .... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #179
Ndewo, ekele na ekele ekele.
Dịka Gh0st si kwuo, ị nwere ike ịnweta ebe a, n'ụzọ kacha mma.
ego .... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #180
Nsogbu kachasị mma m nwere bụ ịchọta TIME ka m nwee ike ịnweta ụgbọ elu m ga-esi ebe a pụọ
Dị ka ị pụrụ ịhụ, XRAY na-aga My erm isii, mile maara lol
Nke ahụ kwuru..all nke a bụ 100% Me, jiri 744LCF na 748F
Ndumodu ikpe azu: site Gh0stRider203.
Oge ike page: 0.227 sekọnd